वडास्तरीय क्रिकेटमा वडा नं. २२, २३ र ८ सेमिफाइनलमा - Sadarline
वडास्तरीय क्रिकेटमा वडा नं. २२, २३ र ८ सेमिफाइनलमा
प्रकाशित मितिः शनिबार, जेष्ठ ३२, २०७६ | 122 Views ||
नेपालगञ्ज : नेपालगञ्जमा जारी अन्तर वडास्तरीय क्रिकेट प्रतियोगितामा वडा नं. २२, २३ र ८ सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् । मंगलप्रसाद उच्च माविको खेल मैदानमा शनिवार भएको प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा वडा नं. २२ ले वडा नम्बर १२ लाई ७ विकेटले पराजित गर्दै सेमिफाइनल प्रवेश गरेको हो ।
खेलमा टस जितेर पहिला व्याटिङ गरेको वडा नं. १२ ले खराब व्याटिग गर्दै ११ ओभर ५ वलमा अल आउट मात्र ६४ रन बनाउन सक्यो । उसका लागि सुनिल खड्काले १६,कैलाश राइले १३,गौतम कनौजियाले १२ रन वनाउनु वाहेक अन्यले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन् । २२ का बलर रबिस बर्मा ले ४, उदेश गोडियाले ३ र अजाद कुमार गोडिया ले २ विकेट लिए ।
जवाफि व्याटिङगमा आएको वडा नं. २२ ले १० ओभर १ बलमै ३ विकेट गुमाएर बिजयी लक्ष भेटायो । उसका लागि पुर्ण बहादुर थापाले १८,अब्दुल बेहनाले १४ रन बनाउनु बाहेक अन्य खेलाडी राम्रो प्रदर्सन गर्न सकेनन् । २३ का बलर सहिद शेखले ३ ओभरमा ७ रन दिएर ४ बिकेट लिए भने रसिद शेखले ३,हसिब शेखले २ बिकेट लिए । खेलमा सहिद शेख म्यानअफ द म्याच घोषित भए ।
त्यस्तै दोस्रो खेलमा वडा न ३ विजयी हुँदै सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ । प्रतियोगिताको पहिलो क्बाटर फाइनलमा उसले वडा नम्बर ११ लाई ५ बिकेटले पराजित गर्यो । खेलमा पहिला व्याटिङ गरेको ११ ले निर्धारित १५ ओभरमा ५बिकेट गुमाउंदै १ सय १० रन वनायो । उसका लागि राहुल कनौजियाले ६०, मोहित गुप्ताले १३ रनको पारी खेले । ३का बलर दिल्साद अन्सारीले ३ रिजबान अन्सारीले २ विकेट लिए । जबाफी व्याटिङमा आएको वडा नं ३ ले ९ ओभर २ बलमा ५ विकेटको नोक्सानी मा बिजयी लक्ष भेटायो ।
उसका लागि बिनोद शाहु २८, रबिश वर्माले १६ रन जोड्दै टिमलाई जित दिलाए । १२ का बलर यश खान, रबिन्द्र बस्नेत र कैलाश राईले समान १र१ विकेट लिए । खेलमा रबिस बर्मा म्यान अफ द म्याच घोषित भए । त्यस्तै प्रतियोगिताको दोस्रो खेलमा वाड नम्बर ४ लाई ४ विकेटले पराजित गर्दै ८ नम्बर सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ । खेलमा पहिला व्याटिग ४ ले १३ ओभरमा अल आउट हुँदै ८९ रन बनाएको थियो । उसका लागि निर्मल ओलीले ३० र सुनिल भण्डारीले २७ रन जोड्नु बाहेक अन्यले दोहोरो अंकसमेत छुन सकेनन् ।
वडा ८ का बलर जानू कसगरले ३ तथा अफाक शेक,र नासिर अन्सारीले २÷२ बिकेट लिए । जबाफी व्याटिगमा आएको ८ ले १३ ओभरमा ६ विकेट गुमाए ९३ रन बनायो । उसका लागि अनुपम सिंहले ३४ र अब्रार शेकले २२ रनको पारी खेले । ४ का बलर सुनिल भण्डारी र आकाश बिस्टले २÷२ विकेट लिए । खेलमा जानू कसगर म्यान अफ द म्याच घोषित भए । प्रतियोगिता तेस्रो खेलमा २३ नम्बर बिजयी भयो । उसले १५ नम्बर लाई २५ रनले हरायो । प्रतियोगितामा आइतबार दुबै सेमिफाइनलका खेलहरु हुनेछन् । पहिलो खेलमा ३ र ८तथा दोस्रोमा २२ र २३ वडा बिच खेल हुने प्रतियोगिताका संयोजक तरुण बज्राचार्यले जानकारी दिए । प्रतियोगिताको विजेताले १ लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ भने उपविजेताले ५० हजार नगद प्राप्त गर्ने छ । एक्सपर्ट एजुकेशन एण्ड भिसा सर्भिसले मुख्य प्रायोजन, कैलपाल कलेजको सह प्रायोजन रहेको छ ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यालय, वडा नं. ७, १०, ११ र १२ को आर्थिक सहयोगमा द ग्रुप अफ सिक्टिनले सो प्रतियोगिताको आयोजना गरेको हो । प्रतियोगितामा खेलाडी तथा दर्शकले एक हातले बल क्याच गरेमा नगद १ हजार पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ । अहिले सम्म १४ जनाले सो नगद पाएका छ्न । एक्सपर्ट एजुकेशन एण्ड भिसा सर्भिसले यसको व्यवस्था गरेको हो ।
प्रकाशित मितिः शनिबार, जेष्ठ ३२, २०७६ 7:10:23 PM |
Prevनालामा डुबेका आचार्यको शव भेटियो
Nextसमुदायमा ‘चाइल्ड ड्रिम’को प्रभाव सकारात्मक